Banyere eTurboNews | eTurboNews | Akụkọ Njem
Home » Banyere eTurboNews
Ozi nke eTurboNews Otu bụ ịnye ọrụ B2B na-efu ego, akụkọ PR maka njem njem ụwa na njem njem yana nkesa ozi site na email na ebe nrụọrụ weebụ na-echekwa nchekwa, ebe a na-achọ ya na nyocha ndị na-agụ akwụkwọ.
eTurboNews, ozi ozi ala anyị, bụ akụkọ ọtụtụ akụkọ kwa ụbọchị nke otu ìgwè zuru ụwa ọnụ nke ndị editọ na-enye onyinye, ndị edemede, ndị nyocha ọbịa na ndị na-edekọ oge ụfọdụ, lekwasịrị anya na ihe omume, akụkọ ụlọ ọrụ, usoro ahịa, ụzọ na ọrụ ọhụrụ, mmepe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmebe iwu. dị mkpa maka njem, njem na njem, yana okwu metụtara ọrụ ndị njem na ọgụ megide ịda ogbenye, yana ọrụ ụlọ ọrụ maka gburugburu ebe obibi na ikike mmadụ.
A na-ahazi ọdịnaya nke akụkọ ndị a dabere na ụkpụrụ ụkpụrụ, mkpa na izi ezi, nwebisiinka chebe ya, yana onweghị mgbasa ozi na nkwado ọ bụla eburu.
Isi ọgụgụ ọgụgụ bụ aha ndenye aha email ntinye aha na 255,000 + n'ụwa niile, ọkachasị ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa njem na ndị njem na ndị nta akụkọ njem na ndị njem.
eTurboNews editọ isiokwu dị maka syndication na republishing site na akụkọ mgbasa ozi ndị ọzọ na ọkọlọtọ okwu.
eTurboNews Na-agbasa News bụ ika ọkọlọtọ maka nkwukọrịta okwu ọ bụla nke ngwa ngwa nke mmadụ ma ọ bụ na-ebugharị ihe akụkọ ngwa ngwa kesara dịka na mgbe ọ dị mkpa.
eTurboNews Mkparịta ụka bụ kọmitii ozi websaịtị na-ahazi maka nzaghachi, nkọwa na mmeghachi omume nke ndị na-agụ ya.
TravelMarketingnetwọk bụ ndụmọdụ gbasara mmekọrịta ọha na eze kwadebere maka mkpa njem na njem njem. Anyị na-enye ọrụ nke ngwọta PR na-arụ ọrụ na ndụmọdụ banyere ahịa na akara maka nnukwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ obere ụlọ ọrụ pere mpe na-arụ ọrụ njem, njem ma ọ bụ azụmahịa metụtara njem.
eTurboNews bụ ma azụmahịa azụmaahịa na azụmaahịa na ọrụ ndị ahịa nke nkesa ntanetị na ozi dị mkpa maka azụmaahịa njem mba ụwa, n'akụkụ ọkachamara njem azụmaahịa ọkachamara PR yana azụmaahịa yana mmekọrịta yana ahụ ụwa metụtara njem na njem, gụnyere UNWTO, WTTC na ICTP na mmekorita mgbasa ozi na ihe ngosi njem tinyere WTM London na IMEX-Frankfurt.
Ofkpụrụ ọrụ bụ kesaa akụkọ ozi na ozi azụmahịa site na email gaa na ndepụta nke nhọrọ njem njem na ndị debanyere aha na mgbasa ozi, ma debe ozi maka iweghachite na nrụtụ aka na weebụsaịtị, na ịnye ngwọta PR na ịre ahịa maka Ndi obere njem na ndi njem njem.
Ha na enweta ego
eTurboNews na-enweta ego ya site na ịkwụ ụgwọ maka nkesa, mgbasa ozi ọkọlọtọ, mgbasa ozi yana site na nkwado nkwado nke nwere ike ịbụ uru ego ma ọ bụ dịka nhazi (mgbanwe). eTurboNews na-enwetakwa ego site na ịchepụta ihe ọpụrụiche PR na ahịa ahịa site na ya eTurbo Nkwukọrịta nkewa.
Na ubi nke nkesa ozi ahia ahia, eTurboNews na-enye uru bara uru site na nbibi zuru ụwa ọnụ ya ozugbo, na-elekwasị anya ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa njem na ụlọ ọrụ mgbasa ozi (ndị nta akụkọ na akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ akụkọ, ndị mgbasa ozi na ọrụ ịntanetị), na ndepụta nkesa email nke ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndebanye aha ndebanye aha na ụwa.
eTurboNews na-agbakwụnye uru na nkesa nke akụkọ azụmahịa njem site na ịkpọ oku na netwọkụ nke ndị nnọchi anya obodo, ndị na-ede akwụkwọ na ndị nyocha iji nye akụkọ banyere uche dị mkpa maka azụmaahịa njem site na nso ihe omume ngwa ngwa karịa mgbasa ozi ọha na eze.
eTurboNews na-agbakwụnye uru site na ịnabata nzukọ mkparịta ụka na weblog metụtara njem na njem nleta nke na-enye mmekọrịta, ozi, na nzaghachi sitere n'aka ndị na-agụ akwụkwọ.
E-akụkọ kachasị ochie zuru ụwa ọnụ edepụtara n'ụwa. Guzosie ike na 1999, mbipụta email kwa ụbọchị kemgbe 2001.
Ọgụgụ: Ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ njem njem 230,000, ndị nta akụkọ 17,000, ndị na-azụ ahịa ihe ruru nde 2.03
Ọnọdụ ala: 30% North America, 30% na Europe, ike na Africa, Gulf Region & Middle East, Central, East na Southern Asia, Australia na Pacific. Obere na South America, China.
Portals ozi ọma:
TravelWireNews: N’ezie ọdịnaya mba ụwa nwere mmetụ nke njem, njem nleta na ikike mmadụ. Ihe 200 + kwa ụbọchị.
eTurboNews: Ndị ọkachamara na-ahụ maka njem njem n'ụwa niile gụnyere ire ere, MICE, PR, ụgbọelu, ile ọbịa, mkpakọrịta, gọọmentị, na mgbasa ozi. 1-3 isiokwu ederede, akụkọ 10-25 kwa ụbọchị.
eTN.travel: Ndị ọkachamara na-ahụ maka njem njem n'ụwa niile: Ọtụtụ ndị na - agụ akwụkwọ na - achọta ụzọ njem site na njikọ na mmekọrịta.
WorldTourismWire: Ndi ndu kacha elu n’ime UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP, PATA, IIPT, IGLTA na otu ndi ozo. Onye isi ulo oru ndi isi na ndi isi nke ndi njem na CVB. Ederede 1-3 n’izu.
www.meegana.nkwu: Ndị na-agụ akwụkwọ maka ebumnuche bụ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ere na Nzukọ Nzuko na Ahụhụ.
www.echinweta.travel: Akụkọ banyere ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu, na nzukọ na ụwa ụgbọelu gụnyere mmelite maka ndị na-elekọta ụlọ ọrụ a.
HawaiiTourismAssociation.com: Blog njem nlegharị anya banyere Hawaii.
hawaiinews.online Akụkọ banyere Hawaii maka ndị ọbịa na ndị obodo
Travelindustrydeals: Ndị ọrụ njem nwere mmasị ịmụ banyere ngwa ahịa na onyinye pụrụ iche. 10-20 na-enye otu izu.
mmanya: ụzọ: Portal maka mmanya, Gọọmet, okomoko na njem
Gaytourism. Njem: Azụmaahịa na ndị njem nwere mmasị na njem LGBT na njem.
Forimmediaterelease.net: Ndị odeakụkọ nwere mmasị na mmelite njem na njem. 5-10 hapụ ọkwa n'otu ụbọchị.
eTurboNews.de: Ndị ọkachamara na-eme njem asụsụ German. Ihe 2-5 kwa ụbọchị.
Worldtourismevents: Ndepụta mmemme na nkwalite.
Njikọ Mba Nile nke Ndị Njem Nlegharị Anya (ICTP)
Mbipụta (e-akwụkwọ akụkọ)
Akwụkwọ akụkọ TravelWireNews TravelWireNews: Mmelite kwa awa 3 na-eru ndị debanyere aha 72,000
eTN Breaking Travel News mmelite oge elekere (ma ọ bụ mgbe imebi akụkọ na-eme na njem na njem njem: 45,200 ndị debanyere aha
eTN Daily: Akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị maka njem njem njem & njem nlegharị anya ụwa: ndị debanyere aha 151,200
eTN Kwa izu: Akwụkwọ akụkọ kwa izu maka njem njem na njem nlegharị anya: ndị debanyere aha 12,100
WorldTourismWire: Akwụkwọ Akụkọ maka ndị ndu njem nlegharị anya, ndị ozi nke njem na ndị isi otu mkpakọrịta, yana onye isi ụlọ ọrụ ndị isi: 7,100 ndị debanyere aha
ForImmediaterelease: Nwelite kwa ụbọchị maka ndi oru nta akuko nwere mmasi banyere njem na njem nlegharị anya: ndị debanyere aha 17,000
Nzukọ: ụzọ: Mmelite kwa izu ma ọ bụ karịa maka ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ere na ụlọ ọrụ MICE, ndị na-agụ 12,100.
.Gbọ njem: Kwa izu ma ọ bụ karịa mmelite na ọdụ ụgbọ elu, ụgbọ elu, na gbasara nsogbu metụtara ụwa ụgbọelu.
Gaytourism: Mmelite akụkọ maka ndị njem LGBT na njem Mmepụta: ndị na-agụ 6,800
Mmanya. Njem nleta kwa izur ruo 1100+ ndị na-agụ mmelite banyere Mmanya, Gourmet na Luxury Travel & Tourism: 1,100 ndị na-agụ akwụkwọ
Hawaiinews.online: Uupdates na Hawaii na Hawaii Tourism: Ndi ogugu 5,600
Travelindustrydeals ugboro abụọ kwa izu melite maka mmadụ 68,000+ ndị njem ụwa dum (ozi ire ahịa)
eTurboNews Mbipụta asụsụ German: Ugboro abụọ n'izu ruru ndị debanyere aha 8,001
Egwuregwu Mgbasa Ozi na Mgbasa Ozi Akụkọ:
Nsonye Google News: eTurboNews - Mbupute Mbupute
Oge Hindustan, Azụmaahịa-Njem, MICE Mmelite, Ndị na-ahụ maka ụgbọelu, TravelTalkMedia na ọtụtụ ndị ọzọ
Facebook: eTurboNews - ọzọ - TravelWireNews - uwa niile - ICTP - gaytourismusa - hawaiinews
Mmekọrịta netwọk gụnyere EIN, CNN Task Group, Group Aviation, Hindustan Times na ndị ọzọ.
Google GUS: eTurboNews - eTN
Twitter: eTurboNews - CNN_Newstrend - WorldTourism Ugbu a - HawaiiTalk - Ndị njem - NjemNkeWine - eTurboNews in German - GAYTOURISM
Etu esi biputere nhapụ gị?
(nhọrọ akwụ ụgwọ na n'efu)
Pịa ebe a ka ịga n'ihu